Ilhaan Cumar Oo Weerarro Hor Leh Lagu Soo Qaaday Kaddib Markii Ay Taageertay Shirkadda Isgaadhsiinta Hormuud Oo Ciidamada Kenya Duqeeyeen - Jigjiga Online
HomeSomalidaIlhaan Cumar Oo Weerarro Hor Leh Lagu Soo Qaaday Kaddib Markii Ay Taageertay Shirkadda Isgaadhsiinta Hormuud Oo Ciidamada Kenya Duqeeyeen
Washington (JigjigaOnline) – Wargeysyo ka soo kala baxa Israa’iil iyo Maraykanka, oo ay ka mid yihiin, The Times of Israel iyo Judicial Watch ayaa Ilhaan Cumar ku cambaareeyay in ay “taageertay Hormuud”, ayna ciidamada nabad ilaalinta ka dalbatay in la ilaaliyo shirkadda iyo isgaarsiinta Soomaaliya.
Wargeyska ka soo baxa Israa’iil ayaa soo xigtay warbixinno ay Qaramada Midoobey qortay. Waxay warbixintooda cinwaan uga dhigeen “Ilhaan Cumar waxay si aan qorsooneyn u taageertay urur xumaan ku can baxay”.
Sidoo kale Judicial Watch ayaa daabacay in Ilhaan ay “dalbatay in la difaaco shirkad uu aasaasay qof mar lagu eedeeyay inuu maalgeliyo argagixiso”.
Ilhaan Cumar oo ka tirsan congress-ka Mareykanka ayaa 25-kii August boggeeda twitter-ka ku qortay “Waxaan aaminsanahay in la ilaaliyo lana difaaco waxyaabaha aasaasiga u ah horumarka , gaar ahaan iyadoo ay socdaan weerararada joogtada ah ee argagixisada”.
Waxay intaa ku dartay “Shirkadaha waxay abuurayaan shaqo, waxayna lug ku leeyihiin suuqyada dhaqaalaha, taas oo qeyb ka ah nabadda”.
Muxiyadiin Xasan Cosobow, oo ah agaasimaha warbaahinta iyo suuq geynta shirkadda Hormuud, ayaa BBC Somali u sheegay in isgaarsiintooda “aan loo adeegsan arrin amniga wax u dhimaysa”.
War qoraal ah oo ay soo saartay Hormuud waxay ku sheegtay in anteenooyiinka la burburiyay ay sababtay in qadka uu ka go’o illaa 4,000 oo qof.
Wasiirka Boosatada iyo Isgaarsiinta ayaa tilmaamay in AMISOM ay “ka dalbanayaan in ay dowladda Soomaaliya kala qeyb qaadato baaritaanka weeraradan soo noqnoqday”.
Wuxuu Wasiir Cabdi Canshuur Xasan sheegay: “Waxaan aaminsanahay in ay muhiim tahay in tallaabada ku habboon laga qaado cadawgan u bareeray beegsiga dhaqaalaha iyo ganacsigeena si waafaqsan shuruucda caalamiga ah”.
Muxiyadiin Xasan Cosobow ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay burburinta wuxuuna tilmamay in ay caddeyn u hayaan: “Waa ciidanka Kenya oo wata qalab militari. Waxay arrintan billaabeen 2017”, ayuu yiri.
isagoo ka hadlayay shaqadooda wuxuu yiri: “Waxaa loogu talagalay in ganacsi loo adeegsado. Cid si qalad ah u isticmaasha maba u ogolaano isgaarsiinteena oo ku kooban deegaannada Soomaalida oo keli ah”.
“Waxaan ku xaqiijineynaa in aan hayno dukumiintiyo caddeynaya in ay yihiin ciidanka Kenya. Waxaan haynaa dad marqaatiyaal ah. Waxaan haynaa in dadka deegaanka ay u sheegeen in ay burburin doonaan shirkadaha isgaarsiinta ee meelahaas ku yaalla”, ayuu hadalka ku daray Muxiyadiin.
Arda Turan: Ciyaaryahan ka tirsan Barcelona oo xukun ku muteystay ka dib markuu Cusbitaal xabad ku dhex riday